पेटभित्रको बच्चीको मार्मिक आत्मकथा यो पढेपछि सबैकाे मन रुन्छ – Todays Nepal
गर्भपात बिशेष गरि कन्या भु्रण हत्या एउटा जघन्य अपराध हो । छोरा होस या छोरि, दुवै आफ्नै सन्तान हुन र दुवैलाइ यो धर्तिमा आउने अधिकार छ । कुरिती र कुसंस्कृतिको नाममा गर्भमै छोरिको हत्या नगरौं, आखिर ती निर्दोष सन्तानको के नै दोष छ र ? फुल्नै नपाइ निर्दयी पुर्वक कोपिलामै फुललाई नमारौ । एउटा देशको सच्चा नागरिक भएको नाँताले जे जन्मीन्छ त्यसैमा खुसी वनौं छोरा या छोरी आफ्नै सन्तान ठानौं । धन्यवाद्….
(अन्तिम सम्म पढेको भए कृपया सेयर गर्न नभुल्नु होला)